Maya Magangelyo Doon Muslimiin ah! | Voice Of Somalia
Maya Magangelyo Doon Muslimiin ah!
Posted on September 9, 2015 by Voice Of Somalia Image
Dowlado ka tirsan Midowga Yurub ayaa si cad u sheegay inaysan dooneyn qaabiladda qaxootiga heysta Diinta Islaamka, xilli ay sii xoogeysanayaan mowjadaha soo galootiga ee kusii qul qulaya wadamadaasi.
Maamulayaasha Jaziiradda Qubrus ayaa xusay inay diyaar u yihiin qaabiladda 300 oo ka tirsan qaxootiga kasoo cararay dagaallada ka socda bariga dhexe, balse shardiga ku xiran ayaa ah inay heystaan Diinta Kirishtaanka. Dowladaha Poland, Slovakia, iyo Czech Republic ayaa horey u gaaray go’aan kaas la mid ah.
Wasiiradda arrimaha gudaha ee Jaziiradda Qubrus Skoratis Hasekos wuxuu tilmaamay in inkastoo uu yaryahay baaxadda dalkiisa haddana ay go’aansadeen qaabiladda boqolaal Kirishtaan ah oo qeyb ka ah soo galootiga ka imaanaya dalalka bariga dhexe, gaar ahaan Suuriya.
Wuxuu hadalkiisa kusii daray : ” arrintu ma ahan inaan nahay kuwa aan bini’aadanimada waxba ka aqoon ama inaan caawinaad bixineyn haddii na looga baahdo, laakiin dhabta aan ka hadalno, go’aankaas waa kaan door bidnay”.
Xoghayaha arrimaha gudaha ee dalka Hungray Viktor Orban oo isna arrimahani ka hadlay ayaa soo cusbooneysiiyay go’aanka ay Dowladdiisu ku diiday inay ku qaabisho qaxootiga Muslimiinta ah. Isagoo ka hadlayay Shir Diblumaasiyadeed oo ka dhacayay magaalada Budapest ee caasimadda dalkaas ayaa waxa uu yiri : “suuragal ma aha in Hungray laga dalbado in ra’yigeeda badasho”.
Orban wuxuu hadalkiisa sii daba dhigay in qul qulka qaxootiga Muslimiinta ee Yurub inuu khal khal gelinayo “Masiixinada” Qaaradda Yurub. Wuxuuna Dowladaha Midowga Yurub ka dalbaday inay Xuduudooda adkeeyaan, islamarkaana aysan aqbalin qaxootiga Muslimiinta u badan ee mudooyinkii lasoo dhaafay dalalkaas kusoo jabay.
Go’aankani ay qaateen qaar ka tirsan Dowladaha Yurub wuxuu kusoo beegmayaa xilli kumanaan Muhaajiriin Muslimiin ah ay weli doonayaan inay galaan Wadamada Yurub, iyagoo iska indha tiraya Cadaawadda qayaxan ee Dowladaha reer galbeedku u muujinayaan dadka heysta Diinta Islaamka!
Dowladaha Carabta iyo kuwa islaamka ee sheeganaya inay dadka Muslimiinta maamulaan ayaa sidoo kale indhaha ka daawanaya dhibaatada heysta dadkaasi qaxootiga ah, waxaana xusid mudan in dowladaha la midka ah Sucuudiga ay awood u leeyihiin qaabiladda Malaayiin Muslimiin ah oo dagaallada Suuriya ka socda kasoo barakacay.
Maxaa kala socotaa 10-ka xirfadood ee hab dhaqan jileedka ku soo badatay Mogadishu. Qore: Prof. Yaxye Caamir
DHAGEYSO:- Gudoomiyaha Dowlada Ee Degmada Qoryooley Oo Qiray In Looga Itaal Roonaaday Dagaalkii Qoryooley.